Sida loo ogaado in ardaydu yaqaanaan sida loo fuliyo waxay barteen | Abuurista khadka tooska ah
Ujeedada ugu weyn ee waxbarashadu waxay ku saleysan tahay waxa aad rabto naqshadeeyaha inuu barto waqtiga aad dhammeyso tababarka.
Haddii ay jiraan wax caddayn ah, su'aalaha ku jira waa in si gaar ah diirada loo saaraa isaga ama ujeedooyinka. Adeegsiga qaabkani dhab ahaan waa aad u faa'iido badan si loo ogaado in naqshad ay ka gudubtay imtixaanka isticmaalka iyo in kale.
1 Shuruudaha Imtixaanka
2 Shuruudaha guusha
2.1 Dhamaadka kal-fadhiga, naqshadeeyayaasha waa inay lahaadaan awood ay:
Haddii aad ku shaqeysid naqshadeynta garaafka oo aad aqoon u siiso ardayda cusub ee qaybtan cajiibka ah, waxaan ku siin doonnaa talo qaar ka mid ah waana in lagu sameeyo imtixaannada isticmaalka, wax mustaqbalka soo hagaagaya.
Imtixaanka isticmaalka, waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelatid inaad aragto sida kaqeybgalayaashu waxay maareeyaan inay dhameystiraan howlaha la tilmaamaySi kastaba ha noqotee, maxay tahay inay runti sameeyaan? Sideed ku ogaan kartaa waxay runti barteen? Jawaabtu way fududahay, waa inay sharxaan markayna si sax ah u sharraxeen, waxaad dhihi kartaa hubaal taas oo ah qaabeynta qaabeynta runtii guuleysatay mahadnaqna shuruudaha guusha waxaad awoodi doontaa inaad dejiso haddii naqshaddu dhab ahaantii tahay naqshad guuleysatay.
Buugga oo cinwaankiisu yahay Naqshadeynta Tababarka Degdegga ah ee George Piskurich, wuxuu ku siinayaa inaad gasho liistada dhabta ah ee wax ku oolka ah, halkaasoo dabeecadaha lagama maarmaanka u ah ka bilow shuruudahaaga guusha.
Tusaalaha tani waa ujeedooyinka fahamka, oo noqon kara "muuji" ama "faahfaahin" iyo kiiskan, kuma filna kaliya in "la fahmo"Taabadalkeed, waxaa lagama maarmaan u ah nashqadeeyaha inuu yiraahdo, "taasi waa," faahfaahintee ama sameeya waxa isku mid ah si uu u muujiyo, si uu u muujiyo inuu si dhab ah u fahmay.
Kadibna, heer sare oo caqabado ah, naqshadeeyaha waa inuu maareeyaa inuu sharaxo ama abaabulo waxa heer sare ah asal ahaan noqon kara "naqshad" ama "qiimeyn". Iyadoo aan loo eegin habka aad go'aansato inaad u isticmaasho si aad ugu bilowdo shuruudahaaga guusha, waa inaad awood u yeelatid inaad fiiriso haddii mid ka mid ah kaqeybgalayaashu yiraahdeen ama sameeyeen wixii ay taageereen. guusha hawshaada.
Marka markaad qorsheyneyso imtixaanka isticmaalka xiga ee aad diiradda saareyso howlaha, waxaad ku bilaabi kartaa adigoo weydiiya wax la mid ah: «¿maxay tahay inuu adeegsadehu awood u yeesho inuu sameeyo markuu yeelanayo naqshad gaar ah?
Dhamaadka kal-fadhiga, naqshadeeyayaasha waa inay lahaadaan awood ay:
La soco ugu yaraan 3 saacadood mashruuc gaar ah.
U samee qaansheeg macaamil ku saleysan waqtiga dabagalka.
Qeex faraqa u dhexeeya waqtiga diiwaangelinta iyo waqtiga dabagalka.
Adoo haysta kuwan 3 shuruudaha guusha, waxaad leedahay saldhig kuu ogolaanaya inaad yeelato dareen aad u cad oo ku saabsan nooca howlaha ay tahay inaad siiso dadka isticmaala.
Hawsha: Hawsha aad siin karto ka qaybgalayaasha waa kuwan soo socda: "hadda oo aad horeba u sameysay diiwaangelin 3 saacadood ah mashruuca Atlas, waa inaad i tustaa sida aad ugu dallacsiin lahayd Alaabada Acme iyadoo lagu saleynayo waqtigaaga dabagalka ah".
Nota: Shuruudaha guusha looma dhaqmo si la mid ah shaqooyinka, maaddaama shaqooyinku leeyihiin macno ka weyn tanina waa sababta loo qoray si ay isticmaaleyaashu u akhriyaan.
Waxay noqon karaan kuwo aad isugu eg, hase yeeshe, shuruudaha guusha ayaa adiga adiga kuu ah, halka shaqada guriga waxaa loogu talagalay ka qaybgalayaasha, marka lagu jiro macnaha isticmaalka fadhiga.
Waxaad arki kartaa mid ka mid ah shuruudaha guusha ee aan kor kuugu magacownay, waxay ku saleysan tahay sharraxaadda wax cayiman, halkii ay kaqeybgalayaashu ka dhameystiri lahaayeen hawl. Tani waa sababta oo ah waa shuruud lagu guuleysto, oo aad u adeegsan karto inaad ku weydiiso su'aal dabagal ah hawsha.
Sidan ayaad ku hubin kartaa taas qaabka maskaxda ee naqshadeynta ayaa cad oo ku filan Loogu tala galay adeegsadayaasha.
Ka fikirida tan, waxaan kugula talineynaa inaad kubilaabto shuruudahaaga guusha Kadibna waxaad bilaabeysaa qorista howlaha iyo su'aalaha dabagalka ah, si aad awood ugu siiso ardayda imtixaanka isticmaalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sida loo ogaado marka nashqadeynta ay ku dhacdo imtixaanka isticmaalka